Home Wararka Saraakiishii xalay la dilay oo saakay lagu aasay Muqdisho
Alaha u xarariistee Waxaa Maanta qabuuro ku yaalla gudaha Isbitaalka Xoogga ee Magaalada Muqdisho Aas Qaran loogu sameeyay Taliyihii Saldhiga Booliska degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir iyo Taliye ku-xigeenkii qeybta Weliyow Cadde oo xalay qarax lagu dilay.
Aaska maanta waxaa ka qayb galay Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska, Mas’uuliyiin, Ehelo iyo dadweyne badan. Saraakiisha Ciidamada iyo Mas’uuliyiinta ka qeyb galay Aaska Baashane iyo Baasid ayaa Alle uga baryay inuu u naxariisto, isla markaana tacsi u diray qoysaska iyo Taliska Ciidanka Booliska oo ay ka baxeen.
Taliyihii Saldhiga Booliska degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir iyo Taliye ku-xigeenkii qeybta Weliyow Cadde ayaa ku geeriyooday qarax Is-miidaamin ah oo lala beegsaday, xili ay ku sugnaayeen Saldhiga Booliska Waaberi.
Qaraxaas ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay Askar ka tirsaneyd Ciidanka Booliska iyo dad shacab ah oo xiligaas marayay wadada, waxaana ku dhaawacmay 6 qof oo isugu jira Askar iyo shacab, kuwaasi oo lagu dabiibayo Isbitaalo ku yaalla Muqdisho.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay Qaraxa lagu dilay saraakiishaas.